Wasiir Bayle oo faah faahin ka bixiyey nidaamka dayn cafinta Somalia
March 26, 2020 Mahad Jama 2
MUQDISHO(P-TIMES)- Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa sheegay in guusha laga gaaray dayn cafinta in ay ku timid dadaal xooggan oo dowladdu ku bixisay dibu habaynta dhaqaalaha dalka ayna sii wadi doonto si ay u xaqiijiso horumar dhaqaale.
Wasiir Bayle ayaa faah faahin ka bixiyey Soomaaliya oo gaartay barta go’aan qaadashada dayn cafinta iyo talaabooyinka xiga ee ay dowladda qaadi doonto.
Waxa uu sheegay in madaxda Soomaalida iyo shacabkooda ay iska kaashadeen qorshahaan sidoo kale uu hore Washington uu kula kulmey madaxda Bangiga Aduunka & IMF isla markaana Soomaaliya ay guul u tahay arintaasi.
Wasiirka ayaa ugu dambeyntii sheegay in talaabada xigta ay tahay in dayn cafinta dhinac laga wado dalkana ay dhinac kale lacago kasoo gasho sidoo kalena tani ay fududaynayso in Soomaaliya ay hesho lacago fara badan.
Waa yaabe yaa qaatay daynta la sheegayo?Daynta la sheegay waxaa lagu sheegay in ay tahay 5.2 billion oo ah ameerikaan doolar?Yaa qaatay lacagahaas?Lacagihii lagu galay doorashooyinkii ee laaluuushka ay niman ula baxeen miyay soomaaliweeyn qabtaa?Ma lacagta Turgi guryaha qaaligaa looga gatay ma soomaali baa lagu leeyhay?Malaayiinta door ee ay hadda wali haystaan madaxdii hore ma soomaali bay ku baxday?Lacagahaasu xamar sooma dhaafaan.Wax yar baa marar hargeeysa lagu hafraa.Lacagtaas xamar baa qabta ee ama haloo cafiyo ama halaga qaato.
Cidii cuntay ha bixiso.
Markaad fiirisid hadalka bayle waa muuqataa sida daynta lagu cunay. Hada ayuuba u malabsanayaa tu horleh.